I-ANC IZOBAMBA INKULUMOMPIKISWANO MAYELANA NENKINGA KA-ACE | Scrolla Izindaba
I-ANC IZOBAMBA INKULUMOMPIKISWANO MAYELANA NENKINGA KA-ACE
Ngabe i-ANC izovumela umuntu obekwe icala lokukhwabanisa nenkohlakalo ukuthi ahole umkhankaso wayo okhethweni lohulumeni basekhaya kowezi-2021?
Futhi kufanele yini ukuthi umholi obekwe amacala alolu hlobo ahlale esikhundleni noma ehle esikhundleni aze atshelwe yizinkantolo ukuthi akanacala?
Lena yimibuzo ecindezela kakhulu ebhekene nomhlangano wale mpelasonto weKomidi Eliphezulu Lesizwe le-ANC.
Intuthuko entsha kwiKhomishini kaZondo ifaka ingcindezi emhlanganweni we-NEC obekufanele ukhulume nje ngamasu omkhankaso wokhetho okhethweni lohulumeni basekhaya kowezi-2021.
AmaQabane bekufanele ahalaliselane ngokusebenza kahle kweqembu okhethweni lohulumeni basekhaya obelusanda kwenziwa.
NoNobhala-jikelele u-Ace Magashule bekufanele abe yiqhawe lokuhola umkhankaso ezweni lonke ngaphandle kosizo olukhulu oluvela kuMengameli uCyril Ramaphosa.
Kodwa iPhini leNhloko yamaJaji uRaymond Zondo seliphendule leli qhawe isikhohlakali.
Okunye okuzoxoxwa ngakho ukuthi uMagashule uvele nini enkantolo e-Bloemfontein ebhekene necala lokukhwabanisa nenkohlakalo elisuselwa ecaleni lokuqhubeka kwethenda le-asbestos lemali eyizigidi ezingama-R220.
Futhi okuvele izolo okwethusayo kokuthi ngesikhathi uMagashule enguNdunankulu wase-Free State, uhulumeni wakhe kuthiwa wasiza abakwaGupta baphanga imali eyizigidi ezingama-R880 ngo-Estina Dairy.
UPaul Holden, umqondisi wezophenyo e-Shadow World Investigations utshele uJustice Zondo ukuthi lo msebenzi uthole imali eyizigidi ezingama-R283 kuhulumeni kaMagashule.
Kodwa “ngohlelo oluyinkimbinkimbi lokukilina imali” abakwaGupta bakhokha imali eyizigidi ezingama-R880.
UHolden uphinde wachaza ukuthi ohlelweni lokushushumbisa imali olusebenzayo, konke lokhu bekujwayelekile.
“Ephenyweni lokushushumbisa imali, le nqubo yaziwa ngokuthi yi-round-tripping, lapho izimali zikhokhwa khona nge-akhawunti ethile yasebhange bese kuthi ngemuva kwesikhathi zibuyiselwe ku-akhawunti efanayo.
“Lokhu kwenzelwa ukudala isithombe sokuthi izimali ezingena kwi-akhawunti ethile yasebhange empeleni zingamanani ahlukene.”
Okusinda emiqondweni yazikhulu be-ANC iqiniso lokuthi okhethweni lohulumeni basekhaya olwedlule leli qembu lalahlekelwa ngomasipala abathathu – i-Nelson Mandela Bay, iGoli kanye ne-Tshwane.